Sarkaal Ka Tirsanaa Urur Samafal Maxalli Ah Oo Lagu Dilay Gaalkacyo * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaalkacyo – Mareeg.com: Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in xalay halkaas lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa hay’ad maxali ah oo lagu magacaabo NRO, isla markaaana ka shaqeysa arrimaha bini’aadantinimada.
Sarkaalka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdi Maxamad Aadan oo ku magac dheeraa Cabdi Dheere, waxa uuna dilkiisa ka dhacay xaafadda Garsoor mana cadda ujeedka dilkiisa iyo shaqsiyaadkii ka dambeeyey
Sarkaalkaan waxaa la sheegay in la togtay xilli uu ku sugna xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo inta u dhaxeysa Hotel Cagaarwayne & Warshad Galay.
Kooxdi dilka geesatay ayaa goobta ka baxsadeen, waxaana dadkii goobta ka agdhawaa sheegeen in dilkaan ay geesten dhowr nin oo ku hubaysna bastoolado. Mana jiro wa kazoo baaxay laamaha amaanka gaalkacyo.
Todobaadkii la soo dhaafay ayey ahayd markii laba qarax uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo, waxaana ku dhintay ilaa far qof halka ay ku dhaawacmeen lix qof.